Apple waxay heshay ogolaansho si ay uga iibiso Apple TV gudaha Shiinaha oo leh xadad badan | Waxaan ka socdaa mac
Telefishinkii ugu horreeyay ee Apple TV ayaa suuqa soo galay 15 sano ka hor. Tan iyo markaas, Apple waxay si joogto ah u cusbooneysiisay qalabkan, aaladdaas ayaa hadda ku jira jiilka lixaad oo leh Apple TV 4K (jiilka XNUMXaad). In kasta oo ay suuqa ku jirtay sannado aad u badan, haddana weligeed laguma suuq-gelin Shiinaha.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay warbaahinta Shiinaha Sina, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ayaa heshay ogolaanshaha in lagu soo saaro qalabkan dalka gudihiisa ee Maamulka Guud ee Saxaafadda iyo daabacadaha marka lagu daro Maamulka Gobolka ee Raadiyaha, shineemooyinka iyo Telefishanka.
Apple TV aan waxtar lahayn
Warkani wuxuu xiiso u yeelan lahaa dadka isticmaala alaabta Apple ee dalka ku jirta haddii aysan ahayn iTunes Movies, Apple TV +, Apple Music iyo Apple Arcade, oo aan laga heli karin dalka. Inaad ka tagto Apple Music dhinac, ma awoodo inaad isticmaasho kirada filimka iyo iibsiga, ama Apple TV + adeegga fiidiyowga ee dheellitirka marka lagu daro barnaamijka ciyaaraha rukunka, adeegga kaliya ee dhabta ah ee dadka isticmaala Shiinaha ay ka heli karaan waddanka waa Shaqada AirPlay.
Si kastaba ha noqotee, shaqadani waa sii kordheysaa waxaa laga heli karaa telefishanno tiro badan oo caqli badanMarka, shaqsiyan, sifiican uma fahmi karo xiisaha shirkada ku saleysan Cupertino laga yaabo inay u laheyd inay qalabkan ku soo saaraan suuqan.
Waa in la xasuustaa taas Netflix dalka kuma jiro sida barnaamijyada kale ee fiidiyowga qulqulaya. Waqtigan xaadirka ah, websaydhada Apple ee ku taal Shiinaha kama soo hadal qaadin soo saarista qalabkan. Jiilkan afaraad, oo la hayn karo laga bilaabo Abriil 30, ma bilaabi doono inuu la kulmo dadka isticmaala illaa bartamaha Maajo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple wuxuu helaa ogolaansho si loogu iibiyo TV-ga Apple ee Shiinaha oo leh xadad badan